ဖြိုးမြတ်အောင် အတွက် ၈ သောင်း တစ်သိန်းဖိုး Vote ပေးဖြစ်တယ်လို့ ဖွင့်ပြောလာတဲ့ သရုပ်ဆောင် ဇော်ဇော်အောင်.. – ရှအေလငျး
ဖြိုးမြတ်အောင် အတွက် ၈ သောင်း တစ်သိန်းဖိုး Vote ပေးဖြစ်တယ်လို့ ဖွင့်ပြောလာတဲ့ သရုပ်ဆောင် ဇော်ဇော်အောင်..
Myanmar Idol Season-3 ပြိုင်ပွဲဝင် ဖြိုးမြတ်အောင်ကို ၈သောင်း၊ ၁သိန်းဖိုး Vote ပေးဖြစ်တယ်၊ သူက ကျွန်တော့် အသဲစွဲပါပဲ” ဆိုတဲ့ သရုပ်ဆောင် ဇော်ဇော်အောင်နှင်တွေ့ဆုံခိုက်မှာတော့????
Myanmar Idol Season-3 ပွိုငျပှဲဝငျ ဖွိုးမွတျအောငျကို ၈သောငျး၊ ၁သိနျးဖိုး Vote ပေးဖွဈတယျ၊ သူက ကြှနျတေျာ့ အသဲစှဲပါပဲ” ဆိုတဲ့ သရုပျဆောငျ ဇျောဇျောအောငျနှငျတှဆေုံ့ခိုကျမှာတော့????
“မိုးကောင်းမြို့နယ်၌ ၁၅ နှစ်အရွယ်သမီးအရင်းအား ဖခင်ဖြစ်သူမှ အလိုမတူပဲ သားမယားအဖြစ် ပြုကျင့်မှု ဖြစ်ပွား”
ဖိုက်ဘာစက်လှေများ တင်ဆောင်ပြီး ရေကြီးရေလျှံမှုများ ဖြစ်ပွားလျက်ရှိသည့် မော်လမြိုင်မြို့သို့ စတင်ထွက်ခွာ
အ​မေရိကန်​က …ဆရာမ​လေးတို့မိသားစု ….လှူတဲ့​ကျောင်း​ဆောင်​သစ်​ ဖွင့်​ပြီ.. …ဝမ်းသာလိုက်​တာဗျာ
သင့်ရဲ့ အစာအိမ် အောင့်လာပါက အရေးပေါ် ဆေးနည်း (ကိုယ်တွေ့ အစွမ်း ထက်လွန်းလို့...
ကွယ်လွန်သွားတဲ့ ဦးကင်းကောင်အတွက် ဝမ်းနည်းစကားဆိုခဲ့ကြတဲ့ အနုပညာရှင်များ
အစကတော့ ….သူတို့ကို …ဆိုင်ထဲက… မောင်းထုတ်ကြတယ်. . ...
“တစ်နှစ်ကိုတစ်ခါသာ နတ်ခင်းထားတဲ့ ကျော်ချောလမ်းပေါ်လာတဲ့ အံ့အားသင့်ဖွယ်...